Ao ny raharaha ny planeta Romeo, dia afaka namana vaovao mba hahita anao ny Daty, ny Fiarahana ary na dia ny fitiavana. Na izany aza, tsy ny rehetra no mandinika miaraka amin’ny mombamomba azy toy ny anao. Noho izany, dia manoro hevitra foana fa tsy maintsy ho tsara sy hampiasa ny fahaiza-misaina, raha miaraka aminao, na amin’ny olona hafa online nifandray mijoro. Koa satria isika tsy te-hametraka ny tenantsika ho toy ny mpitsara ny virtuousness, dia tsy hilaza ny Romeos, toy ny tsy maintsy ho velona. Nefa isika, dia tsy hanome anao ny Fiarahana amin’ny toro-hevitra sy vaovao ilaina, ka ianao ho an’ny tenanao, dia afaka manapa-kevitra. Mandeha tsara amin’ny vaovao manokana mba hanana, na eo amin’ny resaka, ary koa ny mombamomba azy. Zavatra sasany tsy nandre amin’ny vahoaka professional, ohatra, ny adiresy, isa an-telefaonina, kaonty tahiry, na sary antontan-taratasim-panjakana. Ara-bola ny mombamomba tsy ny mizara ny vaovao ara-bola na ny isan’ny karatra amin’ny Aterineto ny Olom-pantany. Famindrana vola na mandefa carte de crédit antsipirihany ho an’ny olona ianao ihany no nihaona an-tserasera na tsy fantatrao tsara. Hiaro ny vatan-kazo-amin’ny fampahalalana (ny fidirana tahirin-kevitra) Manome na iza na iza ny tenimiafina. Azo antoka fa rehetra ny fidirana tahirin-kevitra dia ho voatahiry tsy manana ahiahy. Ny fidirana tahirin-kevitra dia ny Tantara vaovao. Izany amin’ny planeta Romeo mombamomba mifandraika amin’ny adiresy E-Mail sy ny tenimiafina. Mila izany ho an’ny sasany dia ny fangatahana, ohatra, raha ny tenimiafina, na ny adiresy E-Mail ianao dia te-hiova. Ny mombamomba ny toerana ihany koa, raha toa isika rehetra dia te-hahafantatra ny fomba akaiky hafa Mpampiasa, dia tsy hevitra tsara hatrany mba manome ny tena toerana hanaovana izany ampahibemaso hita ny toeram-piasana, ohatra, na any amin’ny toerana izay dia mety na tsy ara-dalàna mba ho pelaka any amin’ny toerana izay misy azy no ampitahaina Pelaka-ny tsy mba mandefitra na, amin’ny ankapobeny, izay tsy mahazo aina ianao. Noho izany, dia afaka manapa-kevitra raha tianao ny toerana tamin’ny alalan’ny GPS na ny toerana misy toeran-kafa. Raha hitanao amin’ny manaraka ny toerana na ny lavitra ny Mpampiasa, ny kely kompà fanjaitra toy ny GPS kisary, dia midika izany fa izy no mampita ny GPS toerana. Toy ny misy lehibe Mampiaraka toerana, afa-tsy ny olona amin’ny fikasana tsara tsy hanao sonia miaraka amintsika. Izany no antony izahay mangataka anao mba hitandrina ny masony sy ny tsy mino ny zava-drehetra. Misy ao amin’ny mombamomba azy, afa-tsy ny sary mamoafady ilay mpilalao sarimihetsika. Afaka ny ho iray karazana tahirin-kevitra rehefa avy eo ny sary vetaveta toerana voasoratra anarana. Lehibe ny olona avy amin’ny hafa fiafaran izao tontolo izao dia te-hamangy anao mivantana sy hanambady. Nahatonga anao ho lasa milionera amin’ny Planeta Romeo-loteria. Raha misy zavatra toa tsy tsara loatra ho marina, dia izany angamba no. Isika dia mampiasa ny olombelona sy ny solon-tsaina (izany hoe, Software) mba manala ny toy izany dia mampidi-doza ny Mombamomba isan’andro. Tokony na dia izany aza mampiahiahy ny Mombamomba na hafatra ho tonga manerana ny, tsindrio fotsiny eo amin’ny Spam — User-report-Rohy. Aza manahy: ny Rafitra raitra, ny hafatra diso mampisava mbola tsy Romeo. Fa ny tatitra bebe kokoa izahay, ny haingana dia afaka mamaly. Mety ho isan-karazany ny Mpampiasa collides miaraka aminareo, dia tsy tian’ny ankizy, na mety tsy manana ny fahatsapana fa misy zavatra tsy mety. Raha izany, mariho: mitandrema mba ho foana ny kely tsara, indrindra fa vaovao ny mombamomba. Topazo maso ny mombamomba ny sata (dia aseho isaky ny mombamomba azy). Andian-tsoratra dia afaka mahita azy Raha toa ka ny Mpampiasa Intrusive na aina, dia afaka manakana azy. Bebe kokoa momba izany ao amin’ny FAQ mametraka fanontaniana, aza misalasala manontany izay azo atao Daty fanontaniana. Ny fanapahan-kevitra afaka manao afa-tsy ianao, rehefa nampahafantarina.
Raha toa ka manana ahiahy, ho amin’ny fepetra ilaina. Mazava ho azy, tsara dia tsara araka ny Sata VIH na ny aretina azo avy amin’ny firaisana. Fa ao an-tsaina foana fa ianao mbola tsy azo antoka zato isan-jato. Ny olona voalohany fivoriana dia foana mahafinaritra. Tena dia ny mafana ny lehilahy ianao niady hevitra niankohoka.
Ny fanantenana, ary maniry anao
Fa mba hitandrina ny zavatra manaraka ireto ao an-tsaina: Inona no ataonao na tsy manao raha ny Firaisana ara-nofo, dia manokana ny fanapahan-kevitra. Fa hijanona miaraka ny fanapahan-kevitra, na raha toa ka ianao ao amin’ny hafanana ny fotoana hafa toa marina.
Izany dia ny fahasalamana
Izany dia ny fiainana. Tsy misy afaka manome antoka anareo fa ny Daty tsy manana aretina azo avy amin’ny firaisana. Araka ny Daty, dia mety ho isan-karazany ny fahatsiarovana sy ny hevitra momba ny ny alina lasa teo tao an-dohako. Raha tsy matoky tena loatra, manontania tena hoe
← HD lahatsary amin'ny chat tsy misy fisoratana anarana, ny hafainganam-pandeha ny fiarahana an-tserasera
Maimaim-Poana Chat Room - Tserasera Tsy Misy Fisoratana Anarana →